China Baby Sleeping Bag orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Senlai
1. Ny orinasanay dia mamokatra kitapo fatoriana indrindra. Ny toerana fivarotana kitapo fatoriana tsara indrindra dia i Eoropa sy Amerika Avaratra.
2. Ny kitapo fatoriana dia mandray lamba vita amin'ny elastika sy firafitra famolavolana elastika. Afaka miala sasatra malalaka ao anaty kitapo fatoriana ny ankizy. Ny kitapo fatoriana dia natao hiarovana amin'ny soroka mba tsy ho tratry ny hatsiaka ny ankizy. Famolavolana zipper roa, zipera roa ho an'ny mora foana sy ny eny ivelany. Misy rojo adhesive ao ambadiky ny kitapo fatoriana, izay misy fidiovana tsara amin'ny rivotra. Ny sosona ivelany dia tantera-drano sy tsy mahazaka rivotra, ny sosona anatiny dia plush, ary ny sosona afovoany dia landihazo. Mafana ary tsy matahotra hatsiaka amin'ny rivotra mangatsiaka.
3. Misy karazany maro ny kitapo fatoriana ao amin'ny orinasanay, ao anatin'izany ny manify, matevina, midina, tsy midina, zipper iray, sisin-tady roa, ambany, volory, vozon'akanjo tsy misy volo, vozon'akanjo volo, barika, barika toradroa, fanidiana tampoka , Fanakatonana velcro. Ny kitapo fatoriana sasany dia azo apetraka amin'ny stroller.
4. Ny kitapo fatoriana dia manana toerana malalaka ary azo ampiasaina ho lamba firakotra sy lamba firakotra. Rehefa misafidy kitapo fatoriana dia afaka misafidy mifanaraka amin'ny halavan'ny zanakao. Ny halavan'ny kitapo fatoriana dia tokony hihoatra ny hahavon'ny zaza, ary ny haben'ny atin'ny kitapo fatoriana dia tokony ho lehibe kokoa noho ny halehiben'ny lohan'ilay zaza. Raha kely loatra ny habeny dia tsy misy toerana ahafahan'ny ankizy mihetsika ao anaty kitapo fatoriana. Fa amin'ny fotoana iray ihany, ny habeny dia tsy tokony ho lehibe loatra, kitapo fatoriana habe lehibe tsy hisy vokany, tsy afaka mitana ny anjara toeran'ny rivotra sy ny hafanana.
5. Ny vokatray dia mety amin'ny fanamarinana Oeko tex 100 haavo 1. Ny orinasa dia mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra batch ary miantoka ny kalitaon'ny lamba amin'ny alàlan'ny fanjairana, fandokoana ary ny dingana hafa. Ny vokatray dia manana tahony tsara ary mahafeno ny fenitra vokatra maitso maimaim-poana sy fumalin maimaim-poana.
Teo aloha: Baby smock
Manaraka: Ankizy Pu Raincoat
Kitapo fatoriana zazakely Pu
Kitapo fatoriana tsy mahazaka rano an-jaza
Kitapo fatoriana tsy misy rivotra entin'ny zaza